WaiYanLin: ကျွန်တော့်အကြောင်း ၁၀ချက်
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 4:12 PM
Ko Waiyan Yei,
၅။ စာရေးအင်မတန်ညံ့ပါသည်။ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေသောအခါ စာစီစာကုံးသည် မဖြေမနေရဖြစ်နေ၏။ ----ထို့ကြောင့် အမှတ်ထွက်လာသောအခါ ၆၀ ကျော်ပဲရခဲ့၏။
U ga taw par thay tel. I tone ga 12pages yay: tar taung mha 57marks pel ya tel byar.
If so, where did you look at? hehe, just be thinking of. Don't soe your seit naw.
ကျွန်တော်စာစီစာကုံးသာ ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ရင် D ထွက်နိုင်တယ်ဗျ။ နော်။
မျက်နှာမကြည့်ရဲဘူးဆိုမှတော့ ... ဟီးဟီး... မျက်နှာမဟုတ်တဲ့နေရာကြည့်မှာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ကိုကြည့်လဲတော့ သေချာမှတ်မိတော့်ဘူး။
၅။ စာရေးအင်မတန်ညံ့ပါသည်။ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေသောအခါ စာစီစာကုံးသည် မဖြေမနေရဖြစ်နေ၏။ ထို့ကြောင့်ရေးပေးလိုက်သည်။ စာစီစာကုံးတို့၏ လိုအပ်ချက်အတိုင်း အားလုံးပေါင်း ၃ ပိုဒ်ပဲပါသည်။ တစ်မျက်နှာပဲရှိသည်။ ဘယ်လိုမှဆက်မရေးတတ်တော့ပါ။ တစ်မျက်နှာပြည့်အောင် စာတစ်ကြောင်းနှင့် တစ်ကြောင်းကြားတွင် လက်ညှိုးတစ်လုံးစာ ခြားပြီးရေးပေးလိုက်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမှတ်ထွက်လာသောအခါ ၆၀ ကျော်ပဲရခဲ့၏။ << ဘ၀တူတွေပဲ.. I can't write an essay too.
ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က စကားကလည်း သိပ်မပြောဘူး။ စကားနည်းတယ်။ စာမရေးတတ်ဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်လည်း မရေးတတ်ဘူး။ တကယ်လည်း မရေးတတ်ဘူး။ စာစီစာကုံးရေးခိုင်းတော့ ကျွန်တော်လေးစားရသော ဆရာတစ်ယောက် အကြောင်းတဲ့ဗျ။ ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လိုဆုံးရမှန်းတောင်မသိတာ။
ကြုံတုန်း ကြွားရအုံးမယ်.. ၁၀တန်းတုန်းက မြန်မာစာ ၆၃ မှတ်ပဲ ရတယ်.. ဟိဟိ.. စာစီစာကုံးကို ၂မျက်နှာလောက် ရအောင် မနည်းရေးလာတာ..( လက်ရေးကြီးကြီး ကျဲကျဲပေါ့ )
ကျွန်တော်က ၁ မှတ်ပိုတယ်။ ၆၄ မှတ် ... ဟဲဟဲ..
wow.. တော်တယ်.. ;)
သောက်ကျိုးနည်း.. ဒါမျိုးတွေမလုပ်ချင်လို့ ခြေရာဖျောက်ထားတာကို အတင်းပါပဲ
ဒီတော့.. ကြုံမှပဲ တိုးတိုးပြောပြမယ်.. ဟုတ်ပြီလား ;)
ဟေ့ကောင်။ အဲဒီလိုပုန်းနေလို့ ရဘူး။ ထွက်ခဲ့။ ဒီတစ်ယောက်ပဲရှိပေမယ့် တခြားလူတွေကိုပါ ပြောပြလိုက်စမ်းပါ။ တိုးတိုးလာပြောရင်လဲ မင်းကိုယ်စား ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးမယ်။ နော်။